Service Adviser Archives - Glory Assumption Space
Service Adviser - Male - (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၉၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁) Service Adviser - Male - (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၉၀၀,၀၀၀ ကျပ် /လှိုင်မြို့နယ် ။ JOB SPECIFICATION • Automotive knowledge and experience • Good communication skills • Proven selling skills • Must be fluent in English (4 skills) • Familiar with Microsoft, Email & Internet • Engineering Related Degree or Automotive related Diploma or Certificate JOB DESCRIPTION • Discuss the vehicle problem with the customer • Communicate and determine customers’ needs to sell the parts and service • Coordinate with Parts team and Service Team for Costing • Report Repaired Order to Service Manager • Follow-up while the repair is in progress • Solving the customer complaints promptly. • Issue the Invoice to Customer by caring Customer Satisfaction • Develop communication skill to reinforce customer relationship. • Regularly report to Marketing Manager. • Preparing Quotation and deliver to customer လှိုင်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Car Service Company ကြီးတွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Car Service Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါ ၀န်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။
၁)Service Adviser - Male - (5) Posts / လစာ - ၇၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၉၀၀,၀၀၀ ကျပ် /လှိုင်မြို့နယ် ။ JOB SPECIFICATION • Automotive knowledge and experience • Good communication skills • Proven selling skills • Must be fluent in English (4 skills) • Familiar with Microsoft, Email & Internet • Engineering Related Degree or Automotive related Diploma or Certificate JOB DESCRIPTION • Discuss the vehicle problem with the customer • Explain and sell MST service by well understanding the MST pricing and payment Policy • Communicate and determine customers’ needs to sell the parts and service • Coordinate with Parts team and Service Team for Costing • Report Repaired Order to Service Manager • Follow-up while the repair is in progress • Solving the customer complaints promptly. • Issue the Invoice to Customer by caring Customer Satisfaction • Develop communication skill to reinforce customer relationship. • Regularly report to Marketing Manager. • Preparing Quotation and deliver to customer လှိုင်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Car Service Company ကြီးတွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်မြို့နယ်တွင်ရှိသော Car Service Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါ ၀န်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Car Showroom Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Service Adviser – Female (5)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /ဗဟန်းမြို့နယ်။ - B.E(Mechaniacl)ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ -Automobileအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ -Customer များ၏လိုအပ်ချက်ကို အကြံညဏ်ပေးနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223783, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )